Etu ị gha esi choputa mmeputa na intaneti ma obu mmeputa nke intaneti mgbe ibiputa-Blog-Book Printing China
Etu ị ga - esi họrọ ọrụ na - adịghị n'ịntanetị ma ọ bụ nrụpụta n'ịntanetị mgbe ị na - ebi akwụkwọ
Oge: 2019-12-17 Hits: 39
With the advent of "Internet era", mbipụta dijitalụ dị na ịrị elu na ịdị elu ya na-apụtawanye ìhè. Ọ nwere ike inyere aka na-ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ iji belata usoro mmepụta, na ụgwọ ọrụ dị ala, mgbanwe dị elu. With the popularity of flow products and "web celebrity" ngwaahịa, ina obere ogbe na ahaziri iwu na-abawanye n'usoro. Digital obibi ụlọ ọrụ ji nwayọọ nwayọọ na-elekwasị anya nke na-ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ. Ọ bụ ezie na ngwa nke teknụzụ obibi akwụkwọ dijitalụ ji nwayọ nwayọ, ọ dị mkpa karịsịa iji rụpụta ọnọdụ mmepụta dabara na sistemu mbipụta dijitalụ.
Ugbu a, e nwere abụọ dị iche iche nke dijitalụ-ebi akwụkwọ na post-pịa mmepụta: mmepụta ihe n'ịntanetị na mmepụta ihe na-anọghị n'ịntanetị. Ọ naghị adịrị ụlọ ọrụ obibi akwụkwọ mfe ịgbanwe ozugbo ọ kpebiri n ’ụzọ a ga-esi mepụta ya. Ya mere olee otu ị ga-esi họrọ? Pls zoo aka na ihe ndị a:
1. Uru nke online mmepụta
1) Azọpụta usoro oge na-ebelata mmepụta oge
2) Chekwaa oghere
3) Zoputa ndi mmadu na ihe ndi ozo
4) Chekwaa ume
5) Enwere ike ịchọta nsogbu nsogbu ngwaahịa n'oge
2. The ọghọm nke online mmepụta
1) Ma eleghị anya, ọ ga-eweta nnukwu akwụkwọ deformation
2) Akwụkwọ deformation uche weta usoro mmeputa na nsogbu idi mma
3) Akụrụngwa ọdịda dara oke
4) A na-egbochi ọsọ nke mmepụta akụrụngwa
Mgbe ibipụta, anyị ga-echebara echiche:
1. Gbaa mbọ hụ na ngwaahịa mma
2. Gbado anya na akụrụngwa itinye n'ọrụ arụmọrụ
3. Nwere ike iji mmepụta ihe n'ịntanetị nwere obere
4. Iji melite usoro mmepụta ma ọ bụ akpaaka usoro
5. Tụlee ọnọdụ ahụ n'ezie
Digital ebi akwụkwọ dị mma karịa omenala ebi akwụkwọ ọhụrụ ebi akwụkwọ usoro, maka nnukwu ahịa na afọ ndị na-adịbeghị anya, ma n'uwa ahia mba na nke ulo, mmụba ngwa ngwa nke ibipụta dijitalụ n'ọhịa dị iche iche. Ndị ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ ntanetị na nhọrọ nke usoro mmepụta kwesịrị ịkpachara anya, iji mee ka mgbanwe ahịa ahịa ka mma. Ha abụọ nwere uru na ọghọm, should "adjust measures to local conditions", nyocha zuru ezu banyere usoro azụmahịa, ngwaahịa mma, ngwa ojiji, ohere ochicho na ihe ndi ozo. Ọ bụrụ na gị mmepụta usoro nwere kacha itinye n'ọrụ nke ngwa arụmọrụ na kasị elu arụmọrụ kwa isi n'isi nke ijide ogo, mgbe ahụ ọ bụ nhọrọ ziri ezi.
Maka ozi ọzọ banyere na, biko attentionaa ntị na www.bookprintingchina.com, ma ọ bụ mee oge atọrọ ozugbo iji hụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe site na sales@bookprintingchina.com.
Na Mbụ Page : Kedu ihe kpatara enwere agba dị iche iche n'oge obibi akwụkwọ
Next Page : Printing ụlọ ọrụ iri ebi akwụkwọ ájá mwepụ usoro